Sheegiddu waxay daaha ka qaadday doonista Ilaah iyo qorshaha aadanaha. Waxsii sheegyada kitaabiga ah, Eebbe wuxuu sharraxayaa in dembiyada aadamiga lagu cafiyo tawbadkeen iyo iimaanka shaqada badbaadada ee Ciise Masiix. Waxsii sheegiddu waxay shaaca ka qaadaysaa Ilaah inuu yahay Abuuraha Qaadirka ah iyo Xaakinka waxkasta waxayna xaqiijinaysaa aadanaha jacaylkiisa, nimcadiisa iyo aaminnimadiisa wuxuuna rumeeysanuhu rumaystaha nolol cibaado leh xagga Ciise Masiix. (Ishacyaah 46,9: 11-24,44; Luukos 48: 4,17-14; Daanyeel 15:2; Yuudas 3,14; Butros)
Aaminteenna ku saabsan wax sii sheegidda Baybalka
Masiixiyiin badan ayaa u baahan dulmar guud oo ka sii sheegidda, sida kor ku xusan, si ay wax uga sii sheegaan aragtida. Tani waa sababta oo ah Masiixiyiin badan ayaa si xad dhaaf ah u buunbuuniya wax sii sheegidda oo waxay sheegtaan inaysan taageeri karin. Dadka qaar, wax sii sheegidu waa caqiidada ugu muhiimsan. Waxay kujirtaa meesha ugu badan ee barashadaada Kitaabka Quduuska ah, waana mawduuca aad rabto inaad aad u maqasho. Buugag cusub oo Ammaandoon ayaa si fiican u iibiya. Masiixiyiin badan ayaa si wanaagsan ufiican inay u fiirsadaan waxa ay aaminsanaantu ka oranayso wax sii sheegidda Baybalka.
Bayaankayagu wuxuu leeyahay saddex jumlado: midda koowaad wuxuu leeyahay in wax sii sheegiddu ay qayb ka tahay soo dejinta Eebbe inagu soo dejiyey, waxayna noo sheegaysaa wax ku saabsan cidda uu yahay, waxa uu yahay, waxa uu doonayo, iyo waxa uu sameeyo.
Qoraalkan ma cadaynayno shaqadiisa badbaadada. Bayaankayaga ku saabsan Ciise Masiix wuxuu leeyahay inuu "u dhintay dembiyadeenna" iyo inuu "dhexdhexaadiyo inta u dhexeysa Ilaah iyo dadka". Waa shaqadii badbaadada ee aan rumeyn karno oo aan ku helno cafis.
Bayaankayagu wuxuu sheegayaa in wax sii sheegiddu wax ka qabato faahfaahinta farsamo ee badbaadada. Waxaan ka helnaa caddeyn taas oo ah Qorniinka, kaas oo aan soo xiganeyno dhammaadka bayaankeenna - Luukos 24. Halka Ciise sarakiciddiisa kor uu ugu fasiray waxyaabo qaar laba xertiyo ah jidka Emmaus. Waxaan soo xiganaynaa aayadaha 44 illaa 48, laakiin waxaan sidoo kale ku dari karnaa aayadaha 25 illaa 27: "Markaasuu wuxuu ku yidhi, Nacasyo yahow kuwa caqliga leh ee qalbi qabow inay rumeeyaan waxa nebiyadu sheegeen oo dhan! Masiixu miyaanay waajib ku ahayn inuu sidan ku silco oo uu ammaantiisa galo? Markaasuu wuxuu ka bilaabay Muuse iyo nebiyada oo dhan, oo micnihiisii ​​oo dhan ayuu uga sheegay Qorniinka oo dhan, (Luukos 24,25-27).
Aayadaha 44 illaa 48 ayaa inbadan na sii sheegaya: "Laakiin wuxuu ku yidhi, Kuwani waa ereyadaydii aan idinku idhi intaan weli idin dhex joogo: Wax kasta oo aan qoro waa inay ku dhacaan sharciga Muuse , nebiyadii iyo Sabuurradii » (V. 44). Mar labaad, isagu ma uusan oran in faahfaahin kasta ay isaga ka saabsan tahay. Waxa uu yidhi waa in qaybaha isaga ku saabsanaa ay noqdaan in la fuliyo. Waxaan u maleynayaa inaan ku dari karno in wax walba aysan aheyn in la fuliyo markii ugu horeysay. Waxsii sheegyada qaar waxay u muuqdaan inay tilmaamayaan mustaqbalka, soo laabashadiisa, laakiin sida uu sheegay, waxay tahay inay noqdaan. Ma aha oo keliya in wax sii sheegiddu ay tilmaamaysay isaga - sharciga ayaa sidoo kale tilmaamay isaga, iyo shaqada uu u qaban doono badbaadadeenna.
Aayadaha 45-48: "Markaasuu garashadooda u furay si ay u gartaan Qorniinka, oo wuxuu ku yidhi: Waa qoran tahay in Masiixu silcin doono oo uu maalinta saddexaad ka soo sara kici doono, iyo in magiciisa lagu wacdiyo toobadda dembidhaafka dadka oo dhan. Ka bilow Yeruusaalem oo ka marag noqo. Halkan Ciise wuxuu sharraxayaa waxsii sheegyada qaarkood isaga ka khuseeya. Ma aha oo keliya sheegiddu inay tilmaamayso silica, dhimashada iyo sarakicidda Masiixa - sheegidda ayaa sidoo kale tilmaamaysa farriinta toobadda iyo cafiska, waana farriin lagu faafi doono dadka oo dhan.
Waxaa xiiso leh in la akhriyo Muujintii 19,10 iyada oo maskaxda lagu hayo waxyaabaha soo socda: "Maraggii Ciise waa ruuxa wax sii sheegidda." Farriinta ku saabsan Ciise waa ruuxa wax sii sheegidda. Waa intaas oo dhan waa tan. Nooca wax sii sheegidu waa Ciise Masiix.
Xukunkayaga seddexaad wuxuu ku darayaa faahfaahinta badan ee ku saabsan wax sii sheegidda. Wuxuu yidhi: "Waxsii sheegiddu waxay ku dhawaaqdaa Ilaah inuu yahay Abuuraha Qaadirka ah iyo Xaakinka waxkasta, waxayna dadka u xaqiijineysaa jacaylkiisa, nimcadiisa iyo aaminnimadiisa, wuxuuna rumeeysanuhu rumeeysanayaa nolol cibaado leh oo ku dhex jira Ciise Masiix." Halkan waxaa ah saddex ujeeddooyin kale oo sheegid ah. Marka hore, waxay noo sheegaysaa in Ilaah yahay xukunka wax walba xukuma. Midda labaad, waxay noo sheegaysaa in Eebbe yahay mid jecel, naxariis badan, oo aamin ah. Midda saddexaadna, wax sii sheegiddaas waxay nagu dhiirrigelineysaa inaan si habboon ugu noolaano. Aynu si dhow u eegno seddexdan ujeeddo.
Wax sii sheegidda Baybalku waxay inoo sheegaysaa in Ilaah yahay xikmad, inuu leeyahay amar iyo amar wax walba. Waxaan soo xiganaynaa Ishacyaah 46,9: 11, oo ah marin taageeraya qodobkan. Xusuuso waagii hore, sidii ay ahayd sidii waayihii hore. Waxaan ahay Ilaah, oo mid kale ma jiro, oo Ilaah aan waxba la mid ahayn. Bilowgii waxaan ku dhawaaqay wixii iman doona, iyo waxa ka sii dambeeya waxa weli dhacaya. Waxaan idhaahdaa: waxaan go’aansaday inay dhacaan, wax walbana oo aan maskaxda ku hayo ayaan sameeyaa. Waxaan uga yeedhaa gorgor bariga ka yimid, oo dal fog ka imanaya ninka fuliya go'aankayga. Sidii aan u idhi, Waan sii daynayaa; Wixii aan qorsheeyeyna waan samaynayaa.
Daanyeel 4,17: 24 wuxuu inoo sheegayaa isla shaygii. Tani waxay dhacdaa isla markii Daanyeel ku dhawaaqo in Nebukadnesar uu maankiisa ka lumi doono muddo toddobo sano ah, oo wuxuu bixinayaa sababahan soo socda: «Waa go’aankii Kan ugu sarreeya Eebahay Boqorka ah, Oo waa lagaa saari doonaa dadka dibadda u bax, oo waa inaad la joogtaa xayawaanka duurka jooga, oo iyaguna waxay kuu oggolaan doonaan inaad cawska u cuntaan sida xoolaha; Awoodda ugu sareysa ayaa ka sarreysa boqortooyooyinka dadku waxayna siisaa cidda uu doonayo » (Daanyeel 4,21: 22).
Waxaan soo xiganaynaa Yuudas 14-15 sababtaas awgeed: «Waxay sidoo kale ka sii sheegtay iyaga Enoog, kan toddobaadna Adam, oo wuxuu yidhi: Bal eeg, Rabbigu wuxuu la yimid kumanaan kun oo quduusiin ah inuu xukumo dhammaantood oo uu ciqaabo dadka oo dhan maxaa yeelay, cibaadola'aantii Ilaah oo dhan way beddeleen, oo innaba wax kasta oo xun oo xunxun bay ka sheegeen isaga.
Waxaan ka fekerayaa halkan Yeremyaah 26,13: "Haddaba jidadkiinna iyo falimihiinnaba hagaajiya, oo codka Rabbiga Ilaahiinna addeeca, oo markaasaa Rabbigu toobad keenayaa sharkii uu kugu hadlay." Haddii dadku beddelaan, Ilaah ayaa bixin doona; isagu kama walwalo inuu ciqaabo; wuxuu diyaar u yahay inuu bilaabo bilow cusub. Cadho malaheyn - waa nin naxariis badan oo diyaar u ah inuu cafiyo.
Tusaale ahaan aaminnimadiisa, waxaan eegi karnaa wax sii sheegidda ku sugan Laawiyiintii 3:26,44. Qaybtani waxay digniin u tahay reer binu Israa'iil in haddii axdigii uu jebiyo, ay jabi doonaan oo maxaabiis ahaan loo kaxaysto. Laakiin markaa dammaanaddan ayaa lagu daray: "Laakiin xitaa haddii ay ku sugan yihiin waddanka cadowga, wali anigu ma diidi karo mana ihi necbahay iyaga, sidaa darteed waa in laga gudbaa iyaga." Waxsii sheegiddani waxay xoojineysaa aaminnimada Eebbe, naxariistiisa iyo jacaylkiisa, xitaa haddii aan ereyadaas gaarka ah loo adeegsan.
Hoosheeca 11 waa tusaale kale oo jacaylka aaminka ah ee Ilaah. Xitaa ka dib markii la sharraxay sida reer binu Israa'iil ee aan aaminka ahayn, aayadaha 8-9 waxaa loo akhriyay: “Qalbigeygu waa mid maanka kale ka shaqeeya, naxariistayda oo dhammuna waa dab. Ma doonayo inaan sameeyo wax aan ku sameeyo reer Efrayim cadhadayda kulul kadib. Waayo, anigu waxaan ahay Ilaah ee nin ma aha, oo waxaan ahay kan Quduuska ah ee idinku dhex jira, oo dooni maayo inaan halaago ahaan doono. Waxsii sheegiddan waxay muujineysaa jacaylka joogtada ah ee Eebbe ee dadkiisa.
Xiriirintan waxaan ka soo xiganaynaa 2 Butros 3,12: 14: «Laakiin maalinta Rabbigu waxay u iman doontaa sida tuug oo kale; ka dibna cirka ku dhalaalo burbur weyn; laakiin waxyaalaha ku jira ayaa ku dhalaali doona kulaylka, oo dhulka iyo waxyaalaha ka shaqeeyaba waxay heli doonaan xukunkooda. Haddii waxaas oo dhami ay dhalaalayaan oo dhan, sidee baad ugu istaagi kartaa is beddelka Quduuska ah iyo cibaado la socosho
Aayadaha 12-15 waxaan akhrinaa: "... yaa sugaya oo ku dadaala imaatinka maalinta Ilaah, goortii samooyinku dhalaali doonaan oo waxyaabuhu ay ka dhalaali doonaan kuleylka. Laakiin waxaynu sugaynaa samad cusub iyo dhul cusub oo loo ballanqaaday oo ay caddaaladdu ku jirto. Sidaas daraaddeed, gacaliyayaalow, intaad sugaysaan, dadaal ku dadaal inaad isqortaan oo aad nabdoonaan ku hor joogsataan, dulqaadashada Rabbigeenna xagga badbaadintaada, iyo sida walaalkeen gacaliye Bawlos u yahay xigmaddii la siiyey. ayaan warqad kuu soo qoray. »
Waxsii sheegiddu waxay noo xaqiijineysaa naxariista Eebbe iyo sida aan ku badbaadi karno Ciise Masiix. Wax sii sheegidu maahan waxa kaliya ee nagu dhiirigaliya inaan ku noolaano nolol cibaado leh. Abaalmarinta mustaqbalkeena ama ciqaabtaada kaliya maahan sababta ugu noolaanshaha cadaalad. Waxaan ka heli karnaa dhiirigelin habdhaqanka wanaagsan waqtigii hore, kan hada iyo mustaqbalkaba. Waagii hore maxaa yeelay Ilaahay wuu inagu fiicnaa oo u mahadceliyay wixii uu horay u sameeyay annaguna waxaan diyaar u nahay inaan sameyno wuxuu yiraahdo. Ujeedada aan hadda u leenahay nolosha kaliya waa jacaylka aan u qabno Ilaah; Ruuxa Quduuska ah ee ina dhex jooga ayaa na siiya rabitaan aan ku qanacno ficilkeenna Mustaqbalka sidoo kale wuxuu caawiyaa dhiirrigelinta dhaqankeenna - Ilaah wuxuu naga digayaa ciqaab, malaha maxaa yeelay wuxuu doonayaa digniintaas inay nagu dhiirrigeliso inaan beddelno dhaqankeenna. Waxay kaloo ballan qaadaysaa abaalmarinno, iyadoo la ogyahay inay iyaguna na dhiirrigeliyaan. Waxaan rabnaa inaan helno abaalmarinta uu na siiyo.
Sekaryaah wuxuu soo wada ururiyey farriinta nebiyada markuu yahay yeedhitaan isbadal: 'Rabbigu wuxuu leeyahay Seba'ood, toobad keena jidadkaaga xunxun iyo falimahaaga sharka ah. Oo Rabbigu wuxuu leeyahay, Iyagu way igu caasiyoobeen, oo dhegna iima ay dhigin. (Zakariah 1,3-4). Waxsii sheegiddu waxay noo sheegaysaa in Ilaah yahay xaakin naxariis leh, iyo waxa uu Ciise inoo sameeyo, waan badbaadi karnaa haddii aan isaga aaminno.
Waxsii sheegyada qaarkood waxay leeyihiin meel fog oo aan ku xirnaaneyn inay dadku sameeyeen wanaag iyo xumaanba. Waxsii sheegyada oo dhami maahan ujeeddadan. Runtii, waxsii sheegyadu waxay ku yimaadaan noocyo badan oo kala duwan oo ay adag tahay in la sheego, marka laga reebo dareen guud, ujeedo kasta oo waxsii sheegyada ayaa u adeega. Qaar waxay ujeedo yihiin ujeedadan, qaar waxay ujeedo yihiin ujeedadaas qaarna ma hubno waxay yihiin.